किसान Archives - Page 39 of 42 - कृषि पत्रिका
शुक्रबार १२ कार्तिक, २०७३
भक्तपुर। दोस्रो ठूलो पर्व तिहार सुरु भइसके पनि भक्तपुरका किसानलाई भने यतिखेर धान भित्र्याउन चटारो छ । तिहार आइसके पनि यहाँका किसान भने धान काट्ने, सुकाउने र धान भित्र्याउनमा व्यस्त छन् । यतिखेर तिहार मनाउने भन्दा पनि धान भित्र्याउने चटारोले किसान यतिखेर धानको खलोमा व्यस्त छन् । भक्तपुर व्यासीमा धान भित्र्याउन व्यस्त किसान कान्छीमाया श्रेष्ठले […]
बिहिबार ११ कार्तिक, २०७३
रोल्पा। विगतका वर्षहरुमा तिहारका बेला सधैँ निराश र मलिन अनुहारमा देखिने ह्वामा–९ बाजाका तिलवीर कामी यसवर्ष भने निकै खुसी र उत्साहित बन्नुभएको छ । कुनै समयमा आयआर्जनको बाटो नहुँदा मुस्किलले एक छाक मात्रै खाएर जीवन गुजार्दै आउनुभएका कामीको जीवनमा छोटो समयमै ठूलो परिवर्तन आएको छ । साँझ बिहानको छाक टार्नकै लागि केहीवर्ष अगाडिसम्म अरुको बाख्रा […]
चिराइतोकोे विक्री घटेपछि किसान चिन्तित
बुधबार १० कार्तिक, २०७३
इलाम। राम्रो मूल्यमा विक्री हुन थालेपछि केही एक दशक अघिदेखि उत्साहित भएर चिराइतो खेतीमा लागेका लेकाली क्षेत्रका किसानको चिराइतोमा अहिले उत्साह मर्दै गएको छ । उत्पादित चिराइतो विक्री गर्नै समस्या भएपछि किसानले चिराइतोको विकल्प खोज्न थालेका छन् । खाली ठाउँमा चिराइतो खेती लगाएर आम्दानी लिंदै आएका किसनले अहिले भने पूरानै खेतीमा फर्किने अवस्थामा पुगेका छन् […]
रेशम खेतीमा आकर्षण घट्यो
शुक्रबार ०५ कार्तिक, २०७३
चितवन । माडीमा व्यवसायिक रुपमा रेशमपालन हुँदै आए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा रेशम खेतीमा आकर्षण घट्दै गएको छ । थोरै लगानी र सानो क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि यस व्यवसायलाई अगाल्ने कृषकहरु विविध कारणले अन्य पेसा व्यवसायतर्फ लाग्दा यसको संख्या घट्दो छ । यस व्यवसायबाट अन्य व्यवसायबाट जस्तो आम्दानीको स्तर नबढेको कारण कृषकहरु अन्य […]
गाई पाले दिनहुँ आम्दानी’
बिहिबार ०४ कार्तिक, २०७३
©दीपेन्द्र सापकोटा मोरङ। करिब छ वर्षअघि यहाँका विज्ञान ढुङ्गानालाई परिवार, आफन्तलगायत धेरैले आफ्नो ‘करिअर’ निर्माणका लागि बिदेसिन सुझाएका थिए । उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि विभिन्न व्यवसायमा हात हालेर असफल हुनुभएका ३२ वर्षीय उहाँलाई यस्तो सुझाव दिनेलाई के लाग्यो भने ‘अब योसँग विदेश जानुको विकल्प छैन ।’ कुखुरापालन, यातायात व्यवसायलगायत कार्यबाट आर्थिक घाटा व्यहोरेका उहाँलाई […]
धादिङका किसानहरुमा मौरीपालन व्यवसायप्रति आर्कषण बढ्दै
धादिङ। धादिङका किसानहरुमा मौरीपालन व्यवसायमा आर्कषण बढ्दै गएको छ । १३ वर्ष अघि मौरीले घेरेको सपना देखेका नलाङका भद्र गिरी अहिले विपनामै मौरीको घेरा भित्रबाट पारिवारिक समृद्धिको बाटो खोज्दैछन् । सपनादेखेको केही महिना पछि श्रीमति भक्तकुमारी वनमा घाँस काट्न जादाँ मौरीको गोलो देखेपछि गिरीलाई खवर गरिन । गिरीले वनमा गएर मौरी त ल्याए राख्न घार […]
केरा उत्पादक कृषकद्वारा भन्सार कार्यालयको गेटमै विरोध
सोमबार ०१ कार्तिक, २०७३
कञ्चनपुर । कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका केरा उत्पादक कृषकले गड्डा चौकी भन्सार कार्यालयको गेटमै केरा तेस्र्याएर विरोध जनाएका छन् । दुवै जिल्लाका केरा कृषकले प्रयोगशालामा परीक्षण नगरीकनै विषादी राखिएको केरा भारतबाट भित्र्याउने कार्यको विरोध गरेका हुन् । “विश्व व्यापार सङ्गठनको मापदण्ड मिचेर विषादी राखेर पकाइएको भारतीय केरा भित्र्याउने कार्यको विरोध गरेका हौँ” कैलालीका केरा व्यवसायी […]
सीमान्तकृत २७ जातजातिलाई ‘तरकारीखेती विशेष कार्यक्रम’
आइतबार ३० असोज, २०७३
– राजाराम कार्की काठमाडौँ। प्रायः ज्यालाबुनी गरी जीवन गुजार गर्न विवश २७ जातजातिलाई केन्द्रमा राखी ‘तरकारीखेती विशेष कार्यक्रम’ लागू भएको छ । नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत धानुक, माझी, दनुवार चेपाङ, प्रजा, सन्थाल, सतार, झागड, भोटे, बाटे, ब्राहमु, बरामु, जिरेल, सुरेल, मेचे, लेप्चा, किसान, राजी, हायु, राउटे, पत्थरकट्टा, कुसुन्डा, वनकटीया, सिमार जिङ्गासक, पुदाम, बदाम जातजाति उक्त कार्यक्रमबाट […]
कुखुरामा लाग्ने रोगका कारणहरु
© जीबछ शाह हाल सानो खोरमा धेरै कुखुरा पाल्ने गरेको चलनले गर्दा आर्थिक दुष्टिकोणले फाईदा जनक लागेतापनि विभिन्न प्रकारका रोगहरु कुखुरामा आउने गर्छ साथै कुखुराको शारिरीक विकासमा समेत कमि आउने गर्छ । कुखुरा फार्ममा रोग लाग्नका प्रमुख कारणहरुः १. रोग ग्रस्त चल्ला (जुन रोग माउपोथि कुखुराबाट चल्लामा सर्ने गर्छ जस्तै पूल्लोरम, सि.आर डि.) खोरमा ल्याई […]
पशुपालक कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याइने
शनिबार २९ असोज, २०७३
झापा । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय झापाले आधुनिक व्यवसायी पशुपक्षी पालनको दिगो विकास गरी यस पेसामा लागेका आम कृषक व्यवसायीको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित सदुपयोग, नवीनतम प्रविधि, ज्ञान, सीपको प्रयोगबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, गुणस्तरमा सुधार गरी गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा तथा संरक्षणमा सहयोग पु¥याई […]